ခွငျတှကေ သငျ့ကိုပဲရှေးကိုကျနတော ဘာကွောငျ့လဲ..? - Barnyar Barnyar
ခွငျတှကေ သငျ့ကိုပဲရှေးကိုကျနတော ဘာကွောငျ့လဲ..?
March 10, 2022 KNOWLEDGE 0
ကမ်ဘာပျေါမှာရှိတဲ့ ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးသောလူတှကေတော့ ခွငျတှရေဲ့ ရူးရူးမူးမူး စှဲမကျနှဈခွိုကျခွငျးကို ခံနရေတဲ့ သူတှပေါတဲ့။ သငျရော အဲဒီ ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးသော လူတှထေဲမှာ ပါနပွေီလား။ ဒါဆိုရငျတော့ ခွငျတှကေ လူတှအေမြားကွီးရှိတဲ့အထဲကမှ သငျ့ကိုပဲ ရှေးပွီးကိုကျရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကို သိဖို့လိုအပျနပေါပွီ။ ဘာအကွောငျးရငျးတှကွေောငျ့ အမွဲ ခွငျတှရေဲ့ သားကောငျ ဖွဈနရေလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျပါဦးနျော။
ခွငျတှကေတော့ သူတို့ရဲ့ သားကောငျကို အမွငျနဲ့ပဲ ရှာဖှလေရှေိ့ပါတယျ။ ခွငျတှကေတော့ အမွငျအာရုံကောငျးကွပွီး ညနပေိုငျးအခြိနျမှာ အမွငျအာရုံနဲ့ပဲ လူတှကေို ရှာဖှပေါတယျ။ ခကျြခွငျး မွငျတှလှေ့ယျတဲ့ အရောငျတှဖွေဈတဲ့ အနီ၊ အနကျနဲ့ နကျပွာရောငျ ဝတျထားတဲ့ သူတှကေတော့ အမြားဆုံး အကိုကျခံရပါတယျ။
အရှယျရာကျပွီးဖွဈတဲ့ ခွငျထီးတှကေတော့ ဝတျမှုနျတှကေို စားသုံးကွပမေဲ့ ခွငျမတှကေတော့ ဥဥဖို့အတှကျ သှေးကို သူတို့ရဲ့ အာဟာရအဖွဈ သောကျသုံးရပါတယျ။ O သှေး အမြိုးအစားတှကေတော့ A နဲ့ B အမြိုးအစားတှထေကျ ခွငျတှကေို ညို့ယူနိုငျပါတယျ။ ၈၅ ရာခိုငျနှုနျးသောလူတှကေ သူတို့ရဲ့ သှေးအမြိုးအစားအလိုကျ သူတို့ရဲ့ ဆဲလျကနေ အခကျြပွတဲ့ အရာလေးတှေ ထုတျလှတျနိုငျပါတယျ။
ခွငျတှကေတော့ ပေ ၁၆၀အကှာကနတေောငျ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျကို အနံ့ခံနိုငျပါတယျ။ အဒါကွောငျ့ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျကို မြားမြားရှုထုတျတဲ့ နရောတှကေို ခွငျတှပေိုလာကွပါတယျ။ လူတှကေ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျကို နှာခေါငျးနဲ့ ပါးစပျကနေ ရှုထုတျတာကွောငျ့ ခွငျတှကေ ခေါငျးနားမှာ တဝီဝီလာလုပျကွတာဖွဈပါတယျ။ အဒါကွောငျ့လညျး ညကရြငျ နားတှညေီးရတာပေါ့။
ခြှေးမှာပါတဲ့ လကျတဈအကျဆဈ၊ ယူရဈ အကျဆဈနဲ့ အမိုးနီးယားတို့ကို ခွငျတှေ အနံ့ခံနိုငျပါတယျ။ ခြှေးစိုနပွေီး ခန်ဓာကိုယျနှေးနတေဲ့ သူတှကေို ခွငျတှကေ သဘောကကြွပါတယျ။
ခွငျတှကေတော့ ဘတျတီးရီးယားတှမြေားတဲ့ အသားအရတှေကေို ပိုပွီးတော့ ကိုကျလရှေိ့ပါတယျ။ တံတောငျ၊ခွထေောကျနရောကို ခွငျအကိုကျမြားရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကလညျး ဒါကွောငျ့ပါပဲ။
လလေ့ာမှုတှအေရတော့ ငှကျဖြားဖွဈစတေဲ့ ခွငျတှဟော ကိုယျဝနျမရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှထေကျ ကိုယျဝနျဆောငျတှကေို ပိုပွီးတော့ ကိုကျလရှေိ့ပါတယျ။ ကိုယျဝနျအရငျ့အမာနဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရှုထုတျတဲ့ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျပမာဏက ကိုယျဝနျမရှိတဲ့သူထကျ ၂၁ရာခိုငျနှုနျး ပိုမြားပါတယျ။
ကိုယျဝနျရှိတဲ့သူတှကေ ခန်ဓာကိုယျမှာ အပူလညျး ပိုမြားတာကွောငျ့ သှေးနှေးသကျရှိတှကေို ကွိုကျတဲ့ ခွငျတှရေဲ့ သားကောငျဖွဈနရေတာလညျးဖွဈပါတယျ။
လလေ့ာမှုတှအေရတော့ လူတဈယောကျကို ဘီယာ ၁၂ အောငျစ သောကျခိုငျးပွီးတဲ့ နောကျမှာ မသောကျခငျကထကျ ခန်ဓာကိုယျပျေါကို ခွငျတှပေိုပွီးတော့ ရောကျလာကွပါတယျ။ ဘီယာသောကျလိုကျတာကွောငျ့ ခြှေးနဲ့ အရပွေားထဲမှာ ethanol ပါဝငျမှု မွငျ့တကျလာခဲ့တယျလို့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ ခွငျတှနေဲ့ ဘီယာရဲ့ ကွားက တိကဆြကျစပျမှုကိုတော့ အခုအထိ ရှာမတှသေ့ေးပါဘူး။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေကတော့ ခြင်တွေရဲ့ ရူးရူးမူးမူး စွဲမက်နှစ်ခြိုက်ခြင်းကို ခံနေရတဲ့ သူတွေပါတဲ့။ သင်ရော အဲဒီ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေထဲမှာ ပါနေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ခြင်တွေက လူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ သင့်ကိုပဲ ရွေးပြီးကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ ဘာအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် အမြဲ ခြင်တွေရဲ့ သားကောင် ဖြစ်နေရလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။
ခြင်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ သားကောင်ကို အမြင်နဲ့ပဲ ရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်။ ခြင်တွေကတော့ အမြင်အာရုံကောင်းကြပြီး ညနေပိုင်းအချိန်မှာ အမြင်အာရုံနဲ့ပဲ လူတွေကို ရှာဖွေပါတယ်။ ချက်ခြင်း မြင်တွေ့လွယ်တဲ့ အရောင်တွေဖြစ်တဲ့ အနီ၊ အနက်နဲ့ နက်ပြာရောင် ဝတ်ထားတဲ့ သူတွေကတော့ အများဆုံး အကိုက်ခံရပါတယ်။
အရွယ်ရာက်ပြီးဖြစ်တဲ့ ခြင်ထီးတွေကတော့ ဝတ်မှုန်တွေကို စားသုံးကြပေမဲ့ ခြင်မတွေကတော့ ဥဥဖို့အတွက် သွေးကို သူတို့ရဲ့ အာဟာရအဖြစ် သောက်သုံးရပါတယ်။ O သွေး အမျိုးအစားတွေကတော့ A နဲ့ B အမျိုးအစားတွေထက် ခြင်တွေကို ညို့ယူနိုင်ပါတယ်။ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေက သူတို့ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် သူတို့ရဲ့ ဆဲလ်ကနေ အချက်ပြတဲ့ အရာလေးတွေ ထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။
ခြင်တွေကတော့ ပေ ၁၆၀အကွာကနေတောင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို အနံ့ခံနိုင်ပါတယ်။ အဒါကြောင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို များများရှုထုတ်တဲ့ နေရာတွေကို ခြင်တွေပိုလာကြပါတယ်။ လူတွေက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ကနေ ရှုထုတ်တာကြောင့် ခြင်တွေက ခေါင်းနားမှာ တဝီဝီလာလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဒါကြောင့်လည်း ညကျရင် နားတွေညီးရတာပေါ့။
ချွေးမှာပါတဲ့ လက်တစ်အက်ဆစ်၊ ယူရစ် အက်ဆစ်နဲ့ အမိုးနီးယားတို့ကို ခြင်တွေ အနံ့ခံနိုင်ပါတယ်။ ချွေးစိုနေပြီး ခန္ဓာကိုယ်နွေးနေတဲ့ သူတွေကို ခြင်တွေက သဘောကျကြပါတယ်။
ခြင်တွေကတော့ ဘတ်တီးရီးယားတွေများတဲ့ အသားအရေတွေကို ပိုပြီးတော့ ကိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ တံတောင်၊ခြေထောက်နေရာကို ခြင်အကိုက်များရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကလည်း ဒါကြောင့်ပါပဲ။
လေ့လာမှုတွေအရတော့ ငှက်ဖျားဖြစ်စေတဲ့ ခြင်တွေဟာ ကိုယ်ဝန်မရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ပိုပြီးတော့ ကိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှုထုတ်တဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏက ကိုယ်ဝန်မရှိတဲ့သူထက် ၂၁ရာခိုင်နှုန်း ပိုများပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အပူလည်း ပိုများတာကြောင့် သွေးနွေးသက်ရှိတွေကို ကြိုက်တဲ့ ခြင်တွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရတော့ လူတစ်ယောက်ကို ဘီယာ ၁၂ အောင်စ သောက်ခိုင်းပြီးတဲ့ နောက်မှာ မသောက်ခင်ကထက် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကို ခြင်တွေပိုပြီးတော့ ရောက်လာကြပါတယ်။ ဘီယာသောက်လိုက်တာကြောင့် ချွေးနဲ့ အရေပြားထဲမှာ ethanol ပါဝင်မှု မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခြင်တွေနဲ့ ဘီယာရဲ့ ကြားက တိကျဆက်စပ်မှုကိုတော့ အခုအထိ ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။
ရေညှိကနေ ထုတ်တဲ့ ကာဗွန်ကင်းမဲ့လောင်စာဆီကို လေယာဉ်မောင်းဖို့အထိတောင် လုပ်နေပြီ
Total Hits : 336065